तिनीहरूले चार मिनेटमा सिर्जना गरे “NYE Customized Countdown” in audio form. Then,afew years later into the highly acclaimed 4K, graphic-intense video countdown which has changed New Year’s Eve events all over the world.
आधिकारिक NYE काउन्टीडाउनले अद्भुत सिर्जना गर्दछ “party-all-night” energy स्थानहरुमा। Dj सेट जो भीड नृत्य, व्यस्त, र पेय तरिका राखेर आधी रात को स्ट्रोक अतीत को पल्ट मा लाभ र बढावा गर्न को लागि!
आफ्नो काउन्टीडाउन प्रकार छान्नुहोस्। तपाईंको लोगो अपलोड गर्नुहोस्, इच्छित अनुकूलन ध्वनि भागहरू, फाइल ढाँचा, र अन्य उपलब्ध विकल्पहरू।